Statement on Criticisms – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 20 September 2010 18 October 2010 Categories Conviction, Reproduction
4 thoughts on “Statement on Criticisms”
သိပ်မှန်တာပေါ့… ” စကားထဲက ဇာတိပြ ” ဆိုတာ…။
လူဆိုတာ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာ ကိုယ် တာဝန်ယူ ရဲရမယ်….။ ဆရာက ဆရာ ရေးခဲ့တဲ့ စကားလုံးတွေကို တာဝန်ယူရဲတာ အားလုံး အသိပါ…။
ဆရာက ကိုယ်တတ်နိုင်ရာ တဖက်တလမ်းကနေ ကလောင်ထမ်းပြီး မြန်မာတွေ သိတတ်၊ မြင်တတ်အောင်၊ တိုးတက်အောင် စွမ်းစွမ်းတမံ လုပ်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပဲ။
အတိုက် အခိုက်တွေတော့ ရှိမှာပေါ့လေ….။
လောကမှာ ဘီလူး၊ သိကြားတွေ ထက်…. ဘီလူး မဟုတ်….သိကြား မဟုတ်……. ” ဘီကြား ” တွေလည်း ပေါတယ် ဗျ….။
ကျွန်တော်ကတော့ ဆရာ စာတွေကို ခုံမင် နှစ်သက်စွာနဲ့ အားပေးနေလျှက်ပါ……။
23 September 2010 at 4:53 pm
မက်မက်က ဦးဦးရဲ့ စာတွေကို အမြဲပဲ လာဖတ်ပါတယ်။
ပို့စ်တွေကိုလဲ ကြိုက်ပါတယ်။ လေ့လာပါတယ်။ ကြိုက်လွန်းရင် မှတ်သားထားပါတယ်။
ကောင်းလိုက်တဲ့ စိတ်ထား …
“သူများပါးစပ်လှုပ်တိုင်းသာ ကိုယ်က လိုက်လှုပ်နေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဘဝဟာ သူများပါးစပ်ထဲမှာပဲ နစ်မွမ်းသွားလိမ့်မယ်”
Previous Previous post: One Forward Mail
Next Next post: A Post on Facebook